सरकारले अस्थायी राजधानीको मुकाम बुटवलमा तोकेपछि दाङको चहलपहल ह्वात्तै घटेको | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
सरकारले अस्थायी राजधानीको मुकाम बुटवलमा तोकेपछि दाङको चहलपहल ह्वात्तै घटेको
| 302 Views | Published Date : 30th January 2018 |
लेख: लालमणी पौडेल आज भोलिको दाङको समय मेला र महोत्सवले भरिएको समय हो । कहीं धार्मिक महोत्सव त कहीं व्यापारिक मेला । यी महोत्सव र मेलाले धेरै भक्तजनहरु र अनेकन दर्शकहरुलाई आकर्षण गरिरहेको छ ।
शिशिरको जाडोले अत्तालिएका मनहरुलाई धार्मिक र व्यापारिक महोत्सवले तताएको छ । वसन्त ऋतुको न्यानोपनलाई स्वागत गर्दै धार्मिक तथा व्यापारिक मेला र महोत्सवहरुले दर्शकहरुको मनलाई तिमाली रहेकाछन् । यिनै मेला र महोत्सवसंगै उठेको दाङ राजधानीको सन्दर्भको कुरालाई लोकतन्त्रमा नेता, जनता र ईमानको प्रसंगमा यो स्तम्भ जोडिएको छ ।
सरकारले अस्थायी राजधानीको मुकाम बुटवलमा तोकेपछि दाङको चहलपहल ह्वात्तै घटेको देखियो । राजधानीको पर्खाईमा वसेका दङाली जनताहरु दाङमा राजधानी नहुने भएपछि केहीदिन आक्रोस पोख्नमा व्यस्त रहे । सडक ताते पनि, लोकतन्त्रका पक्षधर जनता ताते पनि लोकतान्त्रिक विधिमा नेता नतातेसम्म परिणाम निस्कने रहेनछ भन्नेकुरा दाङ राजधानीको प्रसंगले देखाई सकेको छ ।
दाङ राजधानीको प्रस्तावसंग जनताको मतको तुलना गर्ने हो भने लोकतन्त्रमा जनतालाई सर्वोपरि मानिएको भनाई सार्थक रहेजस्तो लागेन । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि रहने भनेको मतदान (भोट) का लागि मात्र रहेछ । जनताले मतदान गरिसके पछि जनताको भोटको मूल्य सून्य बराबर मानिदो रहेछ ।
भोट पछिको जनता र नोट विनाको जात्रा जात्राका लागि मात्र रहेछन् । मतदान गरिसकेपछि जनता जनार्दन र नेता शेरवहादुर बन्दा रहेछन भन्ने कुरा नेताले निर्वाचनमा बोलेका कुराहरु अधुरा रहँदाको संझना हो यो । यतिबेलाको समय भनेको जनता जनार्दन हुने र नेता शेरवहादुर हुने समय हो ।
हिंजो निर्वाचनका समयमा नेता संगसंगै वसउठ गरेका जनता आज आफ्ना नेतालाई भेट्नका लागि समय माग्नु पर्ने वाध्यता वनेको छ । हुनत जनताले कामगर्न पठाएको हुँदा कामको बेस्तताले जनतासंग भेट्ने समय नभएकाले पनि त्यसो भएको हुनु पर्दछ । हिंजो भोट नखसाल्दा सम्म हलो समातेका किसानका हिलाम्मे हातहरुलाई हातमा हात मिलाई अँगालो मार्न पछि नपर्ने नेताहरुले निर्वाचन पछि हात मिलाउन त के टाढैवाट मन मिलाउन पनि अप्ठरो मान्ने परिस्थिति भोग्दै आएका नेपाली जनता सधैं झुक्किदै आएकाछन् ।
यी प्रसंगहरु दाङ राजधानी वन्छ भन्ने सन्दर्भसंग जोडिएका छन् । नेपाल सरकारले अस्थायी राजधानी तोकिसकेपछि त्यसलाई फेरवदल गरी अन्य स्थानमा सार्नका लागि वा स्थायी राजधानी तोक्नका लागि प्रदेश सभाका दुईतिहाई सदस्यको आवश्यकता पर्छ भन्ने संवैधानिक व्यस्था यतिवेला आम नेपाली जनताले बुझेकै कुरो हो । अव दाङ राजधानीको सन्दर्भमा भन्नेहो भने न त दाङ न त वुटवल दुवै स्थानका लागि प्रदेश सभा सदस्यको दुईतिहाई बहुमत पुग्नसक्ने अवस्था देखिदैन ।
जब दुबै स्थानका लागि प्रदेश सभाका दुईतिहाई सदस्यको बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकाले तोकेको अस्थायी मुकाममै प्रदेश सभाको काम कार्यवाही चलाउनु पर्ने देखिएकोले पाँच नं.प्रदेशका हकमा बुटवलमै अस्थायी राजधानीको कामहुँदै गरेको देखियो । प्रदेश सभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहणदेखि लिएर प्रदेश सभा आह्वान गर्ने सन्दर्भका कुराहरु सोही मुताविक हुँदै आएकाछन् ।
अव रह्यो आन्दोलनको प्रसंग । सरकारले राजधानीका अस्थायी मुकामहरु तोकिसकेपछि दाङ लगायतका धेरै स्थानहरुमा राजधानीका लागि जनता सडकमा उत्रिए । जनता सडकमा आईसकेपछि राजमार्ग वन्दगर्ने, आम हडतालको घोषणा गर्ने र दलका नेताहरुको पुत्ला दहन गर्ने जस्ता कामहरु देखिए । जव दङाली जनता उर्लेर सडकमा आए त्यतिवेला मात्र राजनीतिक दलले आन्दोलनको जिम्मा लियो ।
राजनीतिक दलले आन्दोलनको जिम्मा लिईसके पछि आम हडतालको घोषणा भयो । सडक जाम गर्ने र आमहडतालको घोषणा गरी सडकमा टायर वाल्दैमा राजधानीको अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्य फिर्ता लिनका लागि बाध्य बनाउन सकिदैन । यो नेपाली जनताका लागि आफ्नो खुट्टामा आफै वन्चरो हान्ने काम मात्रहो भन्ने सन्दर्भमा पनि चर्चा नभएको होईन ।
तर दाङ राजधानीका लागि आतुर दङालीहरुले यसलाई वारपारको आन्दोलनको संज्ञा दिए । आखिरमा राजधानीको प्रस्ताव पार भायो अर्थात् पारी गयो, वटवलमै भयो । आन्दोलनको सरगर्मी पनि पार भयो अर्थात् पर गयो । अझैं पनि दङाली जनता दाङ राजधानीको मोहमा डुवेकाछन् र दाङ प्रदेशको राजधानी वन्छ भन्ने नेताका भाषण सुन्नमा आतुर छन् ।
नेताजीहरु दाङका विभिन्न धार्मिक महोत्सव र ब्यापारिक मेलाहरुको उद्घाटनमा बेस्त देखिन्छन् । ति कार्यक्रमहरुमा अझैपनि दाङ राजधानी वन्छ भन्ने विषयको चर्चागर्न पछि परेका छैनन् । यो कस्तो विधि रहेछ नेपाली जनताको र नेपालका नेताजीहरुको । जनताले पनि ठीक बेठीक के हो भनि छुट्ट्याउन नसक्ने र नेताजीहरुले पनि आफूले बोलेका कुराहरु पु¥याउन नपर्ने बोलिदिए मात्र पुग्ने यो अचम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त नेपाली जनता र नेपालका नेताहरुवाट सच्चा देशभक्त र ईमान्दार नेपालीहरुले कहिलेसम्म र कुन हदसम्म विश्वास गर्ने हो तराजुमा जोख्न पर्ने भयो ।
एकपल्ट नेताजीहरुले पनि आफूले बोलेका कुराहरु जनताले कति प्रतिशत लेस गरेर बुझनुपर्ने हो त्यो फर्मूला पनि बताई दिए हामीलाई धेरै कुराहरुको सत्यता पच्छ्याउन सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ । अन्यथा, बोलिसकेपछिका कुराहरु पु¥याउन नपर्ने भए बोलीमा राजनीति नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ? किनकि भोलिका दिनमा हामीलाई फेरि पनि मतदानमा जानु पर्छ ।
मतदान गर्दा यिनै प्रसंगहरु संझियो भने मत बदर हुने हो कि ? त्यसैले जनताका सामु बचनबद्ध भईसकेपछि कमसेकम धेरै विकसित मूलुकका नेताहरुले गरेजस्तै तत्काल कुर्सी छाड्न नसके पनि छिमेकी भारतका नेताहरुले रेल दुर्घटना हुँदा पद छाडेको देखेकै छौं । त्यही अभ्यास भएपनि गर्ने हो कि ? धेरै अचाक्ली पदलोलुप बन्न हुँदैन जस्तो लाग्दछ । जनताको मतको कदर जहिले पनि गर्नु राम्रो अभ्यास हो ।
यसले जनतालाई लोकतन्त्रप्रति विश्वास जगाउँछ र नेताजीहरुलाई पनि सच्चा नेता बन्न र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्नमा सहयोग पुग्दछ जस्तो लाग्दछ । तसर्थ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कायम राख्न र लोकतन्त्रको पूर्णताका लागि सवै इमानदार वन्न जरुरी देखिन्छ । अस्तु ।